आज २९६ औं जन्मजयन्ती, एक महान् व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाह– बाबुराम भट्टराई – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २७, २०७४११:०५
काठमाडौं, २७ पुस । सरकारले आज २९६ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको छ । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात सरकारले पृथ्वीजयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिएको यो पहिलोपटक हो ।
राष्ट्र निर्माताको रुपमा मानिएको राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनलाई पृथ्वीजयन्तीको रुपमा मनाउँदै आउने गरिएको छ । तर, २०६३ सालदेखि भने नागरिकस्तरमा पृथ्वीजयन्ती मनाइपनि सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको थिएन ।
सामन्ती राजसंस्थाको जरो उखेल्नु पर्छ भन्दै युद्ध लडेका तत्कालीन नेकपा माओवादीसहितका कार्यकर्ताहरुले पृथ्वीनारायण शाहका शालिक तोडफोड गरेका थिए । तर, अहिले उनीहरुले मुलुकको लागि शाहको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै पृथ्वीजयन्तीको अवसरमा शुभकामना दिन थालेका छन् ।
राजसंस्था फ्यालेर मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्दै भएको सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ता तथा शाहको शालिक तोडफोड हुँदा मौन बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बिहीबार २९६ औं पृथ्वीजयन्तीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
आफ्नो शुभकामना सन्देशमा उनले ‘नेपाली इतिहासका एक महान व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाह’ उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाली इतिहासका एक महान् व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाह ( इ सं १७२३ ( १७७५ ) को २९६ औं जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा वहाँप्रति हार्दिक सम्मान र सबैमा हार्दिक शुभकामना’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा डा. भट्टराईले लेखेका छन् ।
नेपाल एकीकरणमा शाहले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल राज्यको भौगोलिक एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकालाई ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट सबै नेपालीले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ’, डा. भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्, ‘साथै शाहकै भाषामा ‘चार वर्ण छत्तीस जातको फूलवारी’ नेपाललाई एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ परिवेशमा सही संघीयताको प्रवन्धन मार्फत् इन्द्रधनुषी राष्ट्रिय–राज्यको रूपमा भावनात्मक रूपले समेत एकतावद्ध गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।’